Zanu-PF has unleashed terror :: Harare24 News
Published: 18 October 2017 (319 Views)
Joice Mujuru's National People's Party (NPP) has claimed that Zanu-PF has launched a terror campaign in the volatile Mashonaland Central province, threatening villages against supporting the former vice president in next year's elections.
NPP Mashonaland Central provincial chairperson Godfrey Chimombe told Daily News yesterday Zanu-PF has set up a 'terror base' at Chaminuka Training Centre in Mt Darwin. Efforts to get comment from Zanu-PF chairperson for Mashonaland Central Dickson Mafios were fruitless as his mobile phone was not reachable.
In 2008, Mashonaland Central was one of the provinces which witnessed horrific violence which left more than 200 MDC supporters dead when Zanu-PF went on retribution exercise to punish supporters suspected to have backed MDC who beat Mugabe and Zanu-PF hands down in that year's historic, albeit hotly-disputed polls.
Tags: Zanu-PF, Mujuru, Terror,